I-Indiya ibandakanya imfundo ye-blockchain kwizikolo kunye neekholeji | Klever ezezimali
I-Indiya ibandakanya imfundo ye-blockchain kwizikolo nakwiikholeji
Itekhnoloji yeBlockchain inokuguqula icandelo lezemfundo, kwaye iIndiya sele ikhokela ngokuyamkela.
Ngenjongo yokuzisa itekhnoloji yamva nje kunye nokucaca kwicandelo lezemfundo, iIndiya yamkele itekhnoloji ye-blockchain eya kutshintsha indlela abafundi abafumana ngayo ulwazi.
Kutshanje, iNkulumbuso yaseIndiya uNarendra Modi unike izidanga zedijithali kubafundi abaphumelele kumaziko etekhnoloji adumileyo.
Ukuqonda ukubaluleka kweteknoloji ye-blockchain, urhulumente omtsha woMgaqo-nkqubo weSizwe weMfundo ka-2020 (NEP-2020) ubeke isicwangciso esinqwenelekayo sokufikelela kwi-100% yeGross Enrolment Ratio (GER) kwimfundo yesikolo ngo-2030 kwaye iphindwe kabini kwimfundo ephakamileyo, ukufikelela kwi-50. Ipesenti ngo-2035.
Njengoko ilizwe lijongene nokuvalwa kwelizwe ukusuka kwi-COVID-19 bhubhane, kwaye abafundi bahamba phantse ezikolweni nakwiikholeji, ukwamkelwa kobuchwephesha be-blockchain kufike ngexesha elifanelekileyo.
Ngokwamkelwa kobuchwepheshe obutsha, amaziko emfundo anokulandelela imisebenzi yezifundo yabafundi kunye nokubonelela ngolwazi olufunekayo kubo bonke abachaphazelekayo.
Itekhnoloji yeBlockchain inokongeza amanqaku amaninzi ekwenzeni iDigital Education Ecosystem (DEE) eyomeleleyo ebandakanya uphuhliso lomxholo, ukufundisa, ukuvavanya, ukuhlelwa, ukurekhoda kokuzimasa, impumelelo, izatifikethi, izidanga, kunye neediploma.
Abafundi baya kufumana isatifikethi kwifomu yedijithali kwaye esi satifikethi sinokungqinwa nakweyiphi na indawo yehlabathi, akusayi kubakho mfuneko yokufumana ikopi enzima yesatifikethi kwakhona.
Ukufika kwetekhnoloji ye-blockchain ivumela izicelo ezahlukeneyo kumacandelo ahlukeneyo afana ne-logistics, ezolimo, ukuhamba, ukugcinwa kwedatha, ubumfihlo, njl. Itekhnoloji yeBlockchain sele isetyenziswa ngamaziko amaninzi okunika izatifikethi kunye nezidanga.
Urhulumente usebenzisa obu bugcisa okokuqala, eqonda izibonelelo kunye neenguqu anokuzizisa kwinkqubo enkulu yemfundo.
Njengoko itekhnoloji ye-blockchain isebenza kwinkqubo yesakhelo esinikezelweyo, ulwazi olugcinwe kuyo lububungqina bobuqhetseba, luselubala, kwaye lunokuthenjwa.
Itekhnoloji yeBlockchain inokubonelela ngesakhelo esikhuselekileyo nesigqwesileyo sokulawula imihla ngemihla imisebenzi yabafundi. Banokurekhoda ulwazi olunjengee-asayinimenti, ukubakho emsebenzini, kunye nemisebenzi yangaphandle kwesikolo, kulwazi malunga nezidanga kunye neekholeji abathe baya kuzo. Iya kuba yinkqubo ekhuselekileyo eqinisekisa ukuba iirekhodi zemfundo zihlala zingaguquki.
Ngaphandle kwabafundi, kwanolwazi lootitshala lunokugcinwa ngokukhuselekileyo kwaye oko kuya kunceda amaziko ukuba abeke iliso kwindlela asebenza ngayo iifakhalthi ngamaxesha athile. Ulwazi lwabafundi lusenokwabelwana nabo nabaqeshwa, abangathanda ukumqesha umfundi emva kokuba egqibile imfundo yakhe, abenze bafikelele lula kulwazi, ngaphandle kokuchaza iinkcukacha ezininzi.
Nge-NEP-20 yokucela ukwazisa ngemfundo yezifundo ezininzi apho abafundi baya kukwazi ukukhetha indibaniselwano yabo yezifundo eziphambili nezincinci kunye nokuguquguquka ngexesha lesifundo, iteknoloji ye-blockchain inokunceda ukuphumeza isakhiwo esinjalo-entry-and-exit.
Inkqubo yemfundo esekelwe kwi-blockchain-based platform ingasetyenziselwa ukukhuthaza abafundi ukuba bagcine ukungaguquguquki kunye nokufezekisa ukugqwesa kwezemfundo.
Urhulumente kunye neengcali zemfundo ziyaqonda ukuba ukwamkelwa kwe-blockchain kwimfundo kunokunceda ukuphucula ukusebenza kakuhle kwe-ecosystem yemfundo kunye nokwandisa ukusetyenziswa kobutyebi bomntu kunye nomzimba.
Ngokusebenzisa itekhnoloji yamva nje eguqula amacandelo ahlukeneyo, kukho iinkxalabo zeendleko, ukukala, kunye nokudityaniswa neenkqubo esele zisekiwe ekufuneka ziqwalaselwe.
Nangona kunjalo, itekhnoloji ye-blockchain ngokuqinisekileyo inokuzisa iinkqubo ezintsha ezibamba ubhaliso oluphezulu ngelixa zikhuselekile, ziselubala, zisebenzisana, ziyila, kwaye zilungele ikamva.
Akukho kalo 5 Iivoti: 4
Ukhozi lomxholo, intatheli kunye nombhali onomdla wokuphonononga itekhnoloji entsha enokutshintsha ubomi babantu. Idityanisiwe Klever ukwenza i-Crypto ilula. Ukunika ingxelo kunye nokubhala kwi-crypto kunye ne-blockchain kule minyaka imbalwa idlulileyo. Kwakhona kuxelwe kwaye kubhalwe kwezolimo & nokutya, ezothutho, iziseko zophuhliso, intsimbi nokunye okuninzi.